Lifestyle Archives - Yangon Thu Michelle
Articles November 13, 2021
Articles November 8, 2021
ချစ်ရပါသော အမျိုးသမီးထုကြီးရေ …အမျိုးသမီးလစဉ်သုံးဓမ္မတာခွက် (menstrual cup)နဲ့ ပတ်သတ်လို့ မီရှဲရှေ့ဆုံးကနေ တက်တက်ကြွကြွလော်ဘီလုပ်တယ်ဆိုတာ သိကြတယ်ဟုတ်။
Yangon Before and After
Articles September 23, 2021
အရင်က ရန်ကုန်မြင်ကွင်းနဲ့ ၂၀၂၀ က ရန်ကုန်မြင်ကွင်း Yangon Before and After ဘယ်လောက်တောင်များ ကွာခြားသွားလဲ ….။
Solo portrait in Urban Yangon
Portrait & Glamor January 30, 2021
Onabeautiful & fine sunny day, I’m going out for photo shooting around interesting places. Urban Yangon has many colonial[…]
Sausage Omelet Roll in Easy Steps
Activities, Video December 14, 2018
This video is my cooking tips video as well, Sausage Omelet Roll in Easy Steps. ဒီတစ်ခါ ပါဝင်ပစ္စည်းနည်းနည်းနဲ့ အလွယ်ကူဆုံး အသားချောင်းကြက်ဥလိပ်ကြော် ကြော်စားကြမယ်။
DIY video about making Cappuccino
Activities, Video November 9, 2018
Today, I’m gonna share about the most basic DIY video about making Cappuccino. ကော်ဖီဆိုင်တွေပေါများလာတဲ့ အချိန်မှာ ကော်ဖီကောင်းကောင်းတစ်ခွက်က စျေးလဲကြီးပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ အိမ်မှာပဲ အလွယ်တကူဖျော်သောက်လို့ရတဲ့ ကော်ဖီဖျော်နည်းတွေ[…]
Things I Wish to know about Lighting Festival in Myanmar
Festivals, Video October 19, 2018
Every country have their own traditions, today I’m gonna share you about the things I wish I’d known before I tried[…]
Beauty, Video September 28, 2018
How Do I Makeup လို့ပဲ ဒီ video ကို နာမည်ပေးလိုက်မယ်။ ဒီတစ်ခါ ရန်ကုန်သူမီရှဲက နောက်ဗီဒီယိုမရိုက်ခင် အလှပြင်ဖို့လိုနေတာနဲ့ တခါတည်း အလှပြင်နေကြနည်းတွေ ဗီဒီယိုရိုက်လိုက်တယ်။
Flower wholesales market in Yangon
Activities, Places and landmarks, Video September 14, 2018
သူငယ်ချင်းကို လက်ဆောင်ပေးဖို့ ပန်းဝယ်တာ အိမ်နားကစျေးမှာ စျေးကြီးလို့ ရန်ကုန်မြို့က ပန်းသည်တွေ ဘယ်ကနေ ဖောက်သည်ယူလဲ စုံစမ်းရင်း ပြည်ထောင်စုလမ်းကုန်းတံတားအဆင်းနဲ့ သံသုမာလမ်းဆုံက ပန်းစျေး (Flower wholesales market) ကို တွေ့ပါလေရော …။
The Walk for Yangon
The walk for Yangon အစီအစဉ်မှာ လမ်းဝင်လျှောက်တုန်း ရန်ကုန်သူမီရှဲကို မှတ်မိပြီး ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ခဲ့တာကို အမှတ်တရ လာသိမ်းထားတာ ….
Bagan in Our Heart photo exhibition
Environmental, Video September 7, 2018
ဒီတစ်ခါ တင်ဆက်ပေးချင်တာက နှလုံးသာားထဲကပုဂံဓါတ်ပုံပြပွဲ (Bagan in Our Heart photo exhibition) အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အရင်တစ်ပတ်က နှစ်တစ်ရာမြန်မာ့ဖက်ရှင်ဗီဒီယိုကို ကြိုက်ကြတယ်ဟုတ်။ ဒီလိုဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို ဘယ်လိုလက်ဆင့်ကမ်းအမွေပေးလဲ သိလား။
100 years Myanmar Women Fashion
Video, Women Empowerment August 31, 2018
အခု၃ဝမြောက် အထူးစပယ်ရှယ်ဗီဒီယိုလေးလာပါပြီ။ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဖက်ရှင်ဆင်ယင်မှုတွေကို (100 years Myanmar Women Fashion) နှစ်အလိုက်ပြောင်းလဲလာတာကို ကွဲကွဲပြားပြားမြင်ရမှာပါ။
Tun Foundation Library
Places and landmarks, Video August 24, 2018
ဒီတစ်ခါ ရန်ကုန်မြို့မှာရှားပါးလာတဲ့ စာကြည့်တိုက်တွေထဲကမှ ကျန်နေသေးတဲ့တစ်ခုကိုရောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒါက ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းအပေါ်ဘလောက် မြန်မာတိုင်းမ်ရုံးအောက်မှာရှိတဲ့ ထွန်းဖောင်ဒေးရှင်းစာကြည့်တိုက် (Tun Foundation library) ပါ။
Armenian Church Yangon
Places and landmarks, Video June 29, 2018
ဒီတစ်ခါ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းနဲ့ ကုန်သည်လမ်းထောင့်မှာရှိတဲ့ အာမေးနီယမ်းချာ့ချ်ကျောင်း (Armenian Church)ကို သွားလေ့လာဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီချာချ်ကျောင်းကို ၁၈၆၂က တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး အခုချိန်ထိဆို နှစ်ပေါင်း ၁၅ဝကျော်ပြီ။
Activities, Video June 15, 2018
ဒီအပတ်သောကြာနေ့မှာတော့ မိုးရာသီနဲ့ အင်မတန်လိုက်ဖက်တဲ့ ရှောက်သီးသုပ် ကို ပါဝင်ပစ္စည်းအနည်းဆုံး အလွယ်ဆုံးသုပ်ပြထားတယ်။ မီရှဲသုပ်နေကြနည်းလေးပါ။ ကောင်းတယ် မကောင်းဘူးဆိုတာထက် ကြက်သွန်လှီး ဘာညာမလုပ်ချင်တဲ့မီရှဲအတွက်တော့ နတ်သုဒ္ဒါပါပဲ။
LGBT & Human Rights
Video June 1, 2018
ဒီအပတ်တော့ ရန်ကုန်သူမီရှဲက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သူတို့အကြောင်း စပ်စုခဲ့တယ်။ အဓိကတော့ LGBT ကိစ္စပါ။
Musmeah Yeshua Synagogue Yangon
Places and landmarks, Video May 11, 2018
နီးနီးနားနားနဲ့ အမှတ်တမဲ့ ကျော်သွားမိတဲ့နေရာတွေ ရန်ကုန်မှာ အများကြီးပါ။ အဲ့ဒီထဲကမှ ၂၆လမ်း၊ မဟာဗန္ဒုလလမ်း နဲ့ ကုန်သည်လမ်းကြားက ဂျုးလူမျိုးတွေရဲ့ မတ်စ်မီးယား ရေရှူအာ ဂျုးဘုရားကျောင်း (Musmeah Yeshua Synagogue Yangon) ကို ဒီအပတ် သွားခဲ့တယ်။